« CORPS DE PROTECTION CIVILE » : Nanome fiofanana ireo 85 mianadahy tetsy Fiadanana
Manoloana ireo tranga sosialy sy loza voajanahary isan-karazany miseho eto Madagasikara dia niroso tamin’ny fanomezana fiofanana ireo manamboninahitra 85 mianadahy ny vondrona vonjy voina teny Ivato na ny « Corps de protection civile ». 12 février 2018
Ireo manamboninahitra ireo izay manaraka fiofanana ao amin’ny ivon-toerana fanitaram-pahaizana ho an’ny manamboninahitra na ny « centre de perfectionnement des officiers » ao Fiadanana. Araka ny fanazavana dia nanomboka ny 23 janoary ka hatramin’ny 02 febroary lasa teo izany fampiofanana izany. Ny famonjena ny ain’olona vokatry ny loza voajanahary sy vokatry ny loza ateraky ny tsy fahombiazana ataon’ny olombelona, ireo tamin’ny ankapobeny no nifotoran’ny fiofanana. Ankoatra ireo anefa dia nisy ihany koa ny fampiofanana mahakasika ny fiarovana ny sisintany sy ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana.
Araka ny fantatra dia nisy ihany koa ny fiofanana momban’ny famerenana ny filaminam- bahoaka rehefa misy savorovoro. Ity farany izay narahina fampiharana sy fitsapam-pahaizana ary nampisehoana ampahibemaso. « Attestation de formation initiale et de connaissance en protection civile », io kosa no mari-pahaizana nomena azy 85 mianadahy ny zoma lasa teo.
Lanonana izay natrehin’ireo olo-manan-kaja maro, sivily sy miaramila. Azo antenaina araka izany fa hisy fihatsaràny ireo olana maromaro iainan’ny vahoaka taorian’izao fampiofanana izao, isan’izany ny resaka tsy fandriampahalemana sy ny fiantraikan’ny loza voajanahary.